Iqala namhlanje eyeDanone Nations Cup eNtshonalanga yeTheku | Eyethu News
Iqala namhlanje eyeDanone Nations Cup eNtshonalanga yeTheku
“Senyukile isibalo sezikole ezingenelile kulonyaka.”
ABANYE babadlali abazongela umncintiswano weDanone Nations Cup khona maduzane nje.Isithombe: Sithunyelwe.
Sekusukile lokho emaqenjini ezikole ezingaphezulu kwama-43 zaseNtshonalanga yeTheku ezizodudulana koweDanone Nations Cup ezinkundleni zaseReservoir Hills eThekwini namhlanje .
Iqembu elizonqoba kulo mncintiswano lizomela isifunda sasePhayindane kwabazobanga ukumela iKwaZulu-Natali ozodlalelwa e Sugar Ray Xulu Stadium eClermont ngoMeyi 13.
OnguNobhala weDanone Nations Cup ePinetown District uSibongiseni Nzama uncome kakhulu ukwenyuka kwesibalo sezikole ezingenele lomqhudelwano kulesi sifunda.
“Ngonyaka odlule sasinezikole ezingama- 43 kodwa manje sinyukile isibalo, lokho kusho ukuthi izingane ziyagqugquzeleka umazibona ozakwabo sebebuya ngisho kwamanye amazwe.”
“Le sekethi ikhombisile ukuthi ikhiqiza ompetha bodwa ngoba iminyaka emithathu ilandelana isike yayomela isifundazwe, nabaseSiphumelele abaya eBrazil babeqhamuka khona kuleyase Phayindane,”kuqhuba uNzama
Yize selisemome lo lusuku kodwa ezinye zezikole zaseNtshonalanga zikhala ngokuthi bezazi ukuthi le midlalo izoqala ngoMeyi kodwa uma sekuthiwa ngoLwesine kuyesinda kuyehlela okubalwa kuzo iMophela Primary.
“Ngeke sisaba naso isikhathi sokuzilungiselela ngokwanele ngoba thina besingazi ukuthi lemidlalo isingoLwesine, ekubeni izikole zivulwe ngoLwesibili.”
“Kusafanele abafundi bagcwalise amaphepha balande nezitifiketi zokuzalwa konke lokhu sizobe sisithole nini isikhathi sokuzilolonga”kuchaza umqeqeshi wase Mophela uSiyabonga Ndimande.
UNzama uphawule ngokuthi lezi zikole ebezizitshela ukuthi imidlalo izoqala ngoMeyi: “Zonke izikole ezingenele lo mqhudelwano sazinika ikhalenda elikhombisa lonke uhlelo lwawo. Lokhu abakushoyo ukuthi bazwe manje akusilo iqiniso, ngoMeyi kuzobe sekudlala lezo zikole ezizomela izifunda bese kuyvela esizomela isifundazwe,”kusho uNzama.
Ubanjwe e-airport ezama ukuya phesheya noR10m